Tag: ụwa | Martech Zone
Ọ bụ ezie na anyị maara nke ọma etu e-commerce si eto ngwa ngwa na United States, na 4x ọnụego nke mkpọsa, e nwere mba ndị ọzọ na-eme ka ọnụego ndị a dị ka ha na-agagharị na agba ọsọ. Na China, azụmahịa e-commerce toro 51% na 2013 na amụma e-commerce na India na-amali site na $ 13B na 2013 ruo $ 70B site na 2020. Ijikwa azụmahịa karịa eBay na Amazon jikọtara, ụlọ ọrụ China Alibaba na-enye
Everybọchị ole na ole ọ bụla, mụ na nwa m nwanyị na-ese okwu banyere onye nwere ụdọ. Achọrọ m eriri m, ọ na-ahapụkwa ụdọ ya n'ụgbọ ala ya. Ọ bụrụ na anyị ntị bụ ma ala ka otu ọbula ụgwọ percentages… kpachara anya! Ekwentị anyị abụrụla akụkụ nke mmadụ anyị. Ọ bụ ihe jikọrọ anyị na ndị enyi anyị, onye na-edekọ ihe nchekwa dị ugbu a, enyi anyị na-echetara anyị ihe anyị ga - eme, na ọbụlagodi
Tọzdee, Ọktoba 20, 2005 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Ndị America na-emebi emebi. Ọbụna ụfọdụ bụ brats. Cheedị ijikwa n'otu agwaetiti. Agwaetiti gị nwere obere ikike mmadụ, awa gafere ihe ọ bụla ma ị na-asụ asụsụ dị iche. Dọta ndị ọrụ na agwaetiti gị siri ike n'ihi asụsụ obodo na agwaetiti ahụ. Agwaetiti ahụ adịghị n'akụkụ ebe ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ Caribbean, ọ dị oyi ma dị mmiri mmiri na-ewe ọnwa ụfọdụ na-enye awa nke ìhè. Na-etolite, ndị ọrụ gị gụrụ akwụkwọ ikwu okwu